Nooca Cusub Polyquaternium-11 Si Weyn Loo Daahfuray
Y&R waxay wadaa degel cusub oo ah www.yrchemspec.com
Dhibaatada adduunka oo dhan 'Covid-19', waxa noogu muhiimsan dhammaanteen waa 'Hayso Masaafada Bulshada, Nabadgalyo iyo Caafimaad qab', habka ganacsigu aad ayuu isu beddelayaa, wax kasta oo aad ka fileysid isbeddelada noocaas ah ama aan ahayn. wada-hawlgalayaasha iyo wada-hawlgalayaasha awoodda leh si ay si fiican u fahmaan shirkadeena, p ...
Ka hortagga oof wareenka, waanu dhaqaaqeynaa
Bilowga sanadka 2020, markaan ku dhexjirno farxada gu'ga, Coronavirus ayaa nolosheena ku dhex milmay. Dadku waxay bilaabeen inay guryahooda joogaan, booqashooyin la'aan, xaflado la'aan. Waxaan kaliya ka shaqeyn karnaa guriga, laakiin waxaan ku dadaalnay inaan ka gudubno dhammaan noocyada cadaadiska qiimaha si aan u siino macaamiisha tayo sare leh ...
Y&R Acrylates Copolymer ayaa caan ku ah suuqa USA iyo Koonfurta Ameerika
Acrylates Copolymer waa nooc ka mid ah dhumucda iyo joojinta wakiilka kaas oo inta badan loo isticmaalo daryeelka timaha iyo qaababka kale ee daryeelka shakhsi ahaaneed. Halbeegyada Farsamada Muhiimka ah: Muuqaalka Jirka @ 25 ℃ Caano, dareeraha cad cad @ 25 ℃ Qiimaha pH Qiimaha 4.0 ~ 7.0 Mawduuc Adag 28.0 ~ 32.0% Viscosity, ...
Kojic Acid Dipalmitate （KAD） dalabka wax soo saarka qurxinta.
Kojic Acid Dipalmitate (KAD) waa soosaara liposoluble oo ah kojic acid. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 2- palmitoyl methyl -5- palmitoyl - pyranone. Waxay leedahay awood kahoreysa kahortaga sameynta melanin marka loo eego kojic acid. Ma jiro koox hydroxyl ah qaab dhismeedkeeda moleculeed, sidaa darteed ma sameysan doono bond hydrogen with ...